दिपेन्द्र अग्रवालको अन्तर्वार्ता : ‘असली बुल सुरु हुनै लाग्यो’ Bizshala -
दिपेन्द्र अग्रवालको अन्तर्वार्ता : ‘असली बुल सुरु हुनै लाग्यो’
लाखौँ लगानीकर्ताको प्रवेशले बजारमा छिटै सेयरको खडेरी पर्न सक्छ
काठमाण्डौ । सेयर बजार महासमुद्र हो। धैर्यता र प्यासन भए यो बजारबाट अकुत पैसा आर्जन गर्न सकिन्छ। सेयर बजार लामो समयको अनुभवले लगानीबाट मुनाफा कैयौँ गुणा बढाउन सकिने क्षेत्र पनि हो। त्यसैले सेयर बजारमा जति छिटो प्रवेश गर्यो उति नै यो बजारबारे बुझ्न र यसबाट राम्रो कमाइ गर्न सकिन्छ।
नेपालको सेयर बजारमा यस्तै लामो अनुभव र राम्रै कमाइ गर्न सफल लगानीकर्तामध्ये एक हुन् दिपेन्द्र अग्रवाल। सायद कमैलाई थाहा होला उनी १० वर्षको कलिलै उमेरमा सेयर बजार प्रवेश गरिसकेका थिए।
तिनै करोडौँ पोर्टफोलियो भएका लगानीकर्ता अग्रवाल सेयर बजार आफ्नो प्यासन भएको बताउँछन्। अग्रवाल जनरल इन्स्योेरेन्स कम्पनीका सञ्चालक र राष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य व्यापार महासंघका अध्यक्षसमेत हुन्। आफूलाई ट्रेडरभन्दा पनि लगानीकर्ताका रुपमा उनी चिनाउन चाहन्छन्।
सेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न आन्दोलनको मोर्चामा अग्रसर हुुने यिनै युवालगानीर्ता ३७ वर्षीय दीपेन्द्र अग्रवाल र बिजशालाकर्मी भक्तराज रसाइलीबीच समग्र सेयर बजार र अबको दिशा तथा रणनीतिका विषयमा भएको कुराकानीको सारसंक्षेप :
- राजनीतिक उथलपुथलका कारण राजनीतिमा विशेष चासो दिइरहेको छु र यससँगै युवाहरुलाई उद्यमशील बनाउने योजनामा तल्लीन छु। नयाँ विचार र केही गरौँ भन्ने युवाहरुलाई पुँजी दिइरहेका छौँ। यस्तै तराईमा २०० बिघा जग्गा खरिद गरी ४०० परिवारलाई निःशुल्क जग्गा दिने र उनीहरु कृषि उद्यममा लागेर पैसा कमाएपछि सो जग्गाको लागतमूल्यमै जग्गा पास गरिदिने विषयमा नयाँ प्रोजेक्ट बनाउँदैछु।
अहिलेको सेयर बजारको पछिल्लो अवस्थालाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?
- बजार विश्लेषकहरुले बुलिस ट्रेन्ड सुरु भएको दाबी गरिरहेका छन् तर मलाई चाहिँ अझै बुलिस आएको छजस्तो लागिरहेकै छैन। बजारको ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बोनस र हकप्रद जोड्दासमेत अझै घाटामै छन्। अब बल्ल बजारमा प्रवेश गर्दासमेत लगानी सुरक्षित छ। बजारमा ३० प्रतिशत अन्य विविध सेक्टरका सेयरमूल्य ३ देखि ५ गुणा बढे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था नबढेकाले असली बुल सुरु भएकै छैन।
बढ्दो बजारमा लगानीकर्ताले के–कस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्ला ?
- बजारमा थुप्रै सेयर ओभरभ्यालुड भइसकेका छन्। ओभरभ्यालुड सेयर बढाउन सजिलो छ तर अन्डरभ्यालुड सेयरहरु बढाउन निकै कठिन हुन्छ।
बजारबाट कमाउने ३ सूत्र छन्। पीई रेसियो कम, ईपीएस बढी र चुक्तापुँजी कम भएका कम्पनीमा लगानी गरे मनग्यै कमाइन्छ। र, मेरो विचरमा अब फाइनान्स कम्पनीहरुबाट लगानीकर्ताहरु मालामाल हुने सम्भावना एकाएक बढेर गएको देखिन्छ। फाइनान्स कम्पनीका सेयरहरु दोब्बर हुन सक्छ।
सेयर बजारमा पछिल्लो समय सरकारको भूमिकालाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?
- अहिलेको बजार पीई रेसियो, ईपीएसजस्ता फन्डामेन्टल विषयहरुबाट भने धेरै टाढा छ। सरकार र तिनका अंगहरुकै कारण नेपालको सेयर बजार निकै उत्तारचढावपूर्ण अवस्था र म्यानुपुलेट भइरहेको हुन्छ। बजारलाई कमजोर बनाउने काम सरकारले नै गरिरहेको छ। सरकारले नै तयार गरेको ५८ बुँदे कामहरुमध्ये धेरै कुराहरु गर्न बाँकी छ। बजार सुधारका लागि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स, सेयर खण्डीकरणलगायतका विषय ओझेल भइरहेको छ। पुँजी बजारमा नयाँ लगानीका कम्पनी प्रवेशमा वैदेशिक लगानी खुला छ तर दोस्रो बजार चाहिँ खुला छैन। यो विषय निकै गम्भीरपूर्ण हो। नराम्रो भए सरकारले बरु २ वटै बन्द गर्नुपर्छ। तर राम्रो छ भने दुवै खुला हुन आवश्यक छ।
बजार सुधारका केही काम भएका छन् तर ती सुधार केही पनि छैन।
सेयर बजारमा वैदेशिक लगानीको विषय धेरै वर्षदेखि उठ्दै आएको छ तर कार्यान्वयन भने शून्य भयो। आखिरीमा किन विदेशी लगानीकताको आवश्यकता छ ?
- विदेशीले वासलात हेरेर लगानी गर्छन् न कि चुक्तापुँजी कम भएका कम्पनी। कम्पनीको यथार्थ चित्रण गर्ने वित्तीय विवरणका आधारमा विदेशी लगानी आउँछ र अनिमात्र राम्रा कम्पनीका भाउ बढ्छन्।
बजारमा बुलिस ट्रेन्डको माहौल छ भन्छन्, तपाइँको धारणा के छ?
बुल आएकै छैन। बुल आउन राम्रा कम्पनीमा अघिल्लो बुलभन्दा राम्रो पैसा कमाउनुपर्ने रहेछ। नराम्रा कम्पनीमा कमाइ भए पनि राम्रा कम्पनी अहिले पनि घाटामै रहेको मेरो ठहर छ।
उसो भए बुल चाहिँ कहिलेबाट सुरु होला ?
अब यहीँबाट बल्ल बुल सुरु होला कि। असली बुल आउन ३ वटा फ्याक्टर आवश्यक पर्छ। तरलता, न्यून ब्याजदर र नयाँ सरकार गरी ३ फ्याक्टले मात्रै बुल ल्याउँछ भन्ने मेरो ठम्याइ हो। यी ३ फ्याक्टर भए असली बुल सुरु हुन्छ।
अब बजारको दिशा कता हो ?
- अब बजारमा निकट समयमै सेयरको खडेरी पर्छ। एक वर्षभित्रै सक्रिय लगानीकर्ता ३ लाखबाट १६ लाख पुगेको तथ्यांक छ। ५ गुणाभन्दा बढीले बढेका सक्रिय लगानीकर्ता आईपीओहुँदै दोस्रो बजारमा पनि छिर्ने क्रम जारी छ। यही तथ्यांकले नै प्रस्ट पार्छ कि अब बजारमा सेयरको खडेरी (अभाव) हुनेछ।
बजारले छोटो समयमा निकै ठूलै फड्को मार्यो। अनि तपाइँले चाहिँ बजारबाट पछिल्लो समयमा कति कमाउनुभयो नि ?
- म दीर्घकालीन लगानीकर्ता हुँ। म आजीवन यही बजारमा बिताउन चाहन्छु। थोरै हिस्सा अल्पकालीन कारोबारमा पनि छ। पछिल्लो समय मैले ट्रेड गरेरै दोब्बरजति नाफा चाहिँ कमाएँ। मैले नाफा कमाए पनि प्रफिट बुक भने गरेको छैन। बुल जब चरम विन्दुमा पुग्छ तब नाफा बुक गर्ने टार्गेट लिएको छु। मन्जुश्री फाइनान्स, अरुण हाइड्रोपावर, नेपाल इन्स्योरेन्सजस्ता कम्पनीहरुबाट मैलै राम्रै मुनाफा गरेँ।
यसअघिको बुलमा बैंक र माइक्रोफाइनान्सले लिड गरेको थियो। तपाइँको विचारमा चाहिँ अब कुन सेक्टरले लिड गर्ला?
- बजारलाई लिड गर्नेमा बैंकले नगरी सुखै छैन। अबको यो बुलको सर्वाधिक उचाइ बनाउन पनि बैंक बिना असम्भव छ। यद्यपि नाफामा भने अब फाइनान्स कम्पनीहरुले नै लिड गर्छ। यसबाट उच्च प्रतिफल लिन सकिने विषयमा भने मेरो आत्मविश्वास छ।
अब बुलिस बजारलाई कुन फ्याक्टरले ब्रेक लगाउने सम्भावना देख्नुहुन्छ ? समग्र बजारको चुनौतीका विषय के–के छन् ?
- उकालो लागेको बजारमा ब्रेक लगाउने यो सरकारको कुनै औकात नै छैन। ब्रेक लगाउने कोसिस गरे ठूलो दुर्घटना हुनेछ र त्यो दुर्घटनाको जिम्मेवारी स्वयं सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। चुनाव नजिक भएको र सरकारप्रतिको समर्थन खोसिने डरले सरकारले त्यस्तो नकारात्मक निर्णय गर्दैन भन्नेमा म ढुक्क छु।
बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स, ब्रोकर कमिसन कटौती, रियल सेक्टरका कम्पनीको पुँजी बजारमा प्रवेश, लगानीकर्ताको हकहित, वैदेशिक संस्थागत लगानीकर्ता तथा वैदेशिक पोर्टफोलियो लगानी भित्र्याउने, ब्रोकरद्वारा मार्जिन कर्जा प्रवाहलगायतका विषय नै अबका चुनौती हुन्। जसले बजारमा ठूलो अवसर पनि ल्याउँदछ।
सेयर बजारलाई पवित्र स्थान बनाऔँ। आमलगानीकर्तालाई शिक्षित र सजग पनि बनाउँदै लैजाऔँ। लगानीकर्ताका हकहितलाई उठाउन बजार सुधारका विषयमा भएका आन्दोलनमा आमलगानीकर्ताको उत्साहपूर्ण साथ समर्थन र सहभागिता होस् भन्ने चाहन्छु।
Deependra Agrawal Interview